NextMapping | Horumarinta Hogaanka Iyadoo ay la socoto NextMapping ™ Cheryl Cran
NextMapping™ ee hogaamiyaasha
Shirkadaha mustaqbalka u diyaarka ah waxaa abuuray hoggaamiyeyaal diyaar u ah mustaqbal kuwaas oo si xirfad leh ugu xeel dheer wadista isbadalka iyo hal abuurka xawaaraha isbedelka sii kordhaya.
Waxaan lashaqeeynaa macaamiisheenna si aan u soo bandhigno farsamooyinka horumarka hoggaaminta si ay u noqdaan kuwa ka sii dhib badan, hal-abuurnimo leh iyo inaan ka caawino ururku inuu diyaar u noqdo mustaqbalka.
Dadka aan wax qorin waxna qorin qarniga 21-aad ma noqon doonaan kuwa aan wax qori karin waxna qori karin, laakiin waa kuwa aan baran karin, baran karin, dibna u baran karin. ”
Mustaqbalka ereyada muhiimka ah ee shaqada ayaa bixiya aragtiyo, cilmi baaris iyo qorshe-hawleed sida loo helo hada iyo mustaqbalka.
Fariimaha hogaanku waxay bixiyaan fikrado firfircoon iyo habab hal abuur leh oo gacan ka geysanaya dhisitaanka hoggaamiye diyaar u ah mustaqbalka kaasoo kiciya isbeddelada mustaqbalka shaqada.
U qaabee mustaqbalkaaga
Waxaan kula shaqeyn doonnaa si aan u soo qaadno himiladaada waxyoon ee mustaqbalka nolosha. Nidaamkayaga NextMapping ™ waxaan ku siineynaa ragga iyo dumarka hogaaminta ilaha, horumarka iyo talaabooyinka la qaadi karo ee kaa caawinaya inaad abuurto mustaqbalkaaga sharafta leh.
Waxaa la joogaa waqtigii la isku halleyn lahaa & dib loogu noqon lahaa xirfadaha hoggaamineed ee diyaar u ah mustaqbalka
Si loo badbaadiyo oo loogu najaxo waqtiyadan degdegga badan ee isbeddelka degdegga ah, ragga iyo haweenka hoggaanka u baahan waxay horumariyaan xirfadaha lagama maarmaanka u ah, dabeecadaha, aaladaha iyo maan-dooriyaha
Ka hortag heerka ay taagan tahay
Waqtigii fikirka toosan - waa in hogaamiyayaashu ay qaataan fikirka xiisaha leh iyo had iyo jeer iskudayaan inay hubiyaan waxay rabaan inay run ka noqdaan horumarka hogaamineed ee waxtarka leh.
Calaamadi kalfadhiyadaada istiraatiijiyadeed ee mustaqbalka
Xeeladaha ugu fiican ayaa ku bilaabma 'sababta' waxayna ku bilaabaan natiijooyinka mustaqbalka ee maskaxda lagu hayo. Hogaamiyeyaasha diyaarka u ah mustaqbalku waxay dhigayaan asaaska saxda ah si ay u abuuraan mustaqbalkooda ay rabaan. Calaamadee tillaabooyinka adigoo qorsheynaya toban maalmood, toban bilood ama toban sano bixi.
Go'aannada ugu wanaagsan waxaa lagu gaaraa xogta hadda jirta, saxda ah iyo duruufaha saxda ah. Hababkeenna cilmi baarista waxaa ka mid ah sahanno, warbaahinta bulshada, koox mustaqbal leh iyo saynisyahanno dabeecadeed, iyo sidoo kale kooxaha xallinta ee ragga iyo dumarka hoggaanka iyo wax intaa ka badan.
Ma u baahan tahay caawimaaddeena xagga horumarinta hoggaaminta khariidaynta?